Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal Qorsheysan ka fuliyay degmada Kurtunwarey.. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal Qorsheysan ka fuliyay degmada Kurtunwarey..
Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal Qorsheysan ka fuliyay degmada Kurtunwarey..
Ciidamad Xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya AMISOM ayaa howlgal qorsheysan oo lagu bur buriyay saldhigyo kooxda Al-Shabaab ay ka soo abaabuli jireen Weerarada iyo Qaraxyada dadka ay ku dhibaateeyaan.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo la hadlay SONNA ayaa sheegay in Cutubyo ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka oo kaashanaya AMISOM ayaa shalay gelinkii danbe waxay howlgal ka dhan ah Kooxda Nabadiidka Al-Shabaab ka fuliyeen degmada Kurtunwarey iyo nawaaxigeeda.
“Ciidamada Xoogga dalka waxay galeen degmada Kurtunwarey,waxayna bur buriyeen saldhigyo Shabaabka ay lahaayeen oo ay ka soo abaabuli jireen Qaraxyada iyo weerarada dadka ay ku dhibaateynayaan, “ ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Najax.
Ibraahim Aadan Najax oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in markii ay Ciidamada Xoogga dalka ay ku soo guuleysteen howlgalkii Qorsheysnaa ay ka fuliyeen degmada Kurtunwarey iyo nawaaxigeeda dib ugu soo laabteen fariisimihii markii hore ay ku sugnaayeen.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidan oo kale horay howlgalo qorsheysan uga fuliyay qeybo ka mid ah dalka oo ay ku sugaanyeen Maleeshiyada Argagixisada Al-Shabaab,kuwaasoo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab,iyadoona lagu bur buriyay saldhigyo ay ka soo abaabuli jireen Qaraxyada.
Previous articleGuddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda oo Dhagax dhigay MCH-ka degmada Wadajir (Sawirro).
Next articleWasiirka Gaashaandhigga XFS oo sheegay iney xoogga saari doonaan dhismaha iyo Tayeynta Ciidanka Cirka (Sawirro).